I-SuperSport imemezele u-Eric Tinkler njengomqeqeshi omusha | isiZulu
I-SuperSport imemezele u-Eric Tinkler njengomqeqeshi omusha
Usule isigubhukane umqeqeshi welePSL okhonjwa ku-United
Umqeqeshi waphesheya uthi umdlali weChiefs ufanelwe ukudlala e-Europe
Cape Town – Ngemuva kwesikhathi esingakanani esule isigubhukane kuCape Town City FC, iSuperSport United isiyethule u-Eric Tinkler njengomqeqeshi omusha weqembu.
Lo mqeqeshi oneminyaka engu-46 ubudala uchithe isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezingu-12 eMother City, njengoba ahola amaCitizens – ngesizini yawo yokuqala esigabeni sePremiership – nalapho egcine ethathe khona isicoco seTelkom Knockout Cup aphinde aqeda esendaweni yesithathu kuligi ye-Absa Premiership.
I-CEO yeSuperSport, uStanley Matthews, uthi le kilabhu ijabule ifile ngokuthola uTinkler futhi ukholwa ukuthi lo mqeqeqeshi owayengukaputeni weBafana Bafana uzibonakalisile kuCity.
“Sijabule ngo-Eric eyisa iqembu phambili. Usazibekela umaka njengomdlali waphesheya futhi nanjengomqeqeshi, unerekhodi elihle kakhulu lokwakha abadlali abancane kanye nokuncintisana kanzima kwiPSL,” kusho uMatthews esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: Usule isigubhukane umqeqeshi welePSL okhonjwa ku-United
“Ngokuhlungelwa imiqhudelwano eyehlukene yasekhaya kanye nowamanqamu wezwekazi, usewakhombisile amava akhe okuba ngomunye wabaqeqeshi abakhulukazi eNingizimu Afrika kwingomuso.”
ICity iqinisekise ukuthi aMatsatsantsa asebenzise umbandela wokuthengwa ngenhloso yokukhipha kwinkontileka uTinkler njengoba ekhethe ukushiya iKapa alibangise ePitoli.
I-United ibilokhu izama ngayo yonke indlela ukuthola umqeqeshi ozovala isikhala kulandela ukuthi uStuart Baxter amukele umsebenzi wokuqeqesha iBafana Bafana, nalapho abaqeqeshi ababili ababeqeqesha i-Orlando Pirates, uRuud Krol kanye noRoger de Sa bobabili bebeyamaniswa nokuvala isikhala sakhe.
Kodwa-ke uBaxter unomdlalo owodwa osamsalele esebhentshini labaqeqeshi kuSuperSport kanti uzobe ebheke ukuvala ngegiya eliphezulu ngokuthi athathe isicoco.
UBaxter uyena ozobe ehola iSuperSport emdlalweni wamanqamu uma ngabe isibhekene ne-Orlando Pirates ngoMgqibelo, mhlaka-24 kuJuni, emdlalweni womqhudelwano we-Nedbank Cup.
Iqembu elizowina lizothola ithuba lokudlala emqhudelwaneni wangonyaka ozayo weCAF Confederations Cup.
UMphahlele ukholelwa ukuthi basasembangweni wesicoco seligi
Umdlali wasemuva weKaizer Chiefs uRamahlwe Mphahlele uthi ikilabhu yakhe isangasithatha isicoco seligi, nakuba emancane amathuba.
Lowo owayengumdlali we-Orlando Pirates neSantos uKamaal Sait ukholelwa ukuthi indodana yakhe uJunaid ingcono kakhulu kunabanye abadlali abagijima kwi-PSL.
U-Ace Ncobo uhoxile embangweni wesokuhola i-Safa
Lowo owayengunondweba we-Safa u-Ace Ncobo ngeke esabangisana noDanny Jordaan okhethweni lozohola le nhlangano yebhola kulandela umhlangano ababenawo.
Uboshiwe umfundisi ngamacala okunukubeza ngokocansi
Cpt: 16-23°C Pta: 15-25°C
Jhb: 13-21°C Bloem: 13-24°C
Dbn: 17-24°C PE: 17-25°C
Durban - 09:16:33 AM ROAD RACE event between Durban and Umdloti - EXPECT DELAYS / DIVERSIONS Ezinye zasemigwaqeni